जताततै महाराज- विविधा - कान्तिपुर समाचार
लच्छुलाई लाग्यो, महाराज चुरोट तान्दै चिया खाइरहेका छन् । पछि थाहा भयो, त्यो त उसकै गाउँको गुन्डा रहेछ ।
फाल्गुन ८, २०७७ शरच्चन्द्र वस्ती
सत्तारूढ पार्टीको एउटा गुटको आमसभा ‘विशाल’ देखाउन रातभरि बसमा हालेर बिहान काठमाडौं झारिएको लच्छु चौधरीलाई आमसभा शुरू भएपछि चियाको उग्र तलतल लाग्यो । ऊ स्वयंसेवकहरूको आँखा छलेर सुस्तरी छेउ लाग्यो र लुसुक्क एउटा चियापसलमा पस्यो ।
अरू टेबुल आफूजस्तै आयातित ‘जन’ ले भरिभराउ देखेपछि ऊ कुनाको टेबुलतिर लम्कियो, जहाँ एकजना बूढो मानिस एक्लै बसेको थियो । झुस्स दारी पालेको, आँखामा गाजल लगाएको, प्रभावशाली अनुहार र गठिलो जीउको ।
लच्छु कुर्सीमा बस्नै लाग्दा महाराजको नाम लिएर आमसभामा कुनै नेता चिच्यायो, ‘उनी जंगबहादुर बन्न चाहन्छन् ।’ त्यो सुनेर बूढो मुसुक्क हाँस्यो र आमसभातिर हेर्दै बर्बरायो, ‘महाराजलाई मात्र के भन्छौ, तिमीहरू पनि त जंगबहादुर नै बन्न चाहन्छौ नि । त्यही बन्न नपाएर यत्रो रुवाबासी चलेको छ !’
आठ कक्षा पास गरेको लच्छुले धेरै अघि स्कूलमा जंगबहादुर र राणा शासनका बारेमा पढेको थियो । तर के पढेको थियो, उसलाई याद थिएन । बूढाको कुराले उसको उत्सुकता जाग्यो । सोध्यो, ‘जंगबहादुर भनेको के हो ? राम्ररी बुझाइदिनोस् न ।’
‘यिनीहरूले भनेको जंगबहादुर त्यस्तो व्यक्ति हो, जसले आफूलाई कानून भन्दा माथि ठान्छ । जो शक्तिको भरमा कानून तोड्न हिचकिचाउँदैन,’ बूढाले हाँस्तै भन्यो, ‘सुन्छौ उसको कथा ?’
‘भन्नोस् न,’ लच्छुले बूढालाई पनि चिया मगायो ।
बूढो भन्न थाल्यो : आज भन्दा पौने दुई सय वर्ष अघि देशको सत्ता कब्जा गरेपछि जंगबहादुरले आफ्ना भाइहरूलाई एकान्तमा बोलाएर भने, ‘अब यो देशको मालिक म हुँ । मेरो हुकुम नै यहाँको ऐन, कानून हो । कानून मैले दिने हो, त्यसैले म कानून भन्दा माथि छु । मलाई कानूनले छुँदैन । ऐन–कानून लाग्ने रैतीलाई मात्र हो ।’
उनी भन्दैगए, ‘तिमीहरू मेरा भाइ हौ । हामीमा एउटै रगत बगेको छ । त्यसैले तिमीहरू पनि कानून भन्दा माथि हुनेछौ ।’
‘तर दाजै, हजूर श्री ३ महाराज होइबक्सन्छ । हामी श्री १ मात्र छौं । कानूनले हामीलाई कसरी चिन्ला ? माइला भाइले चिन्ता जाहेर गरे ।
जंगबहादुरले भने, ‘अब उप्रान्त मेरो नामलाई नै आफ्नो थर बनाऊ । थरको सट्टा जंगबहादुर राणा लेख्न थाल । त्यसपछि मेरो आत्मा तिमीहरूमा प्रवेश गर्नेछ । तिमीहरूको अनुहारमा म उपस्थित हुनेछु । अनि ऐन–कानून तिमीहरूबाट डराउनेछ । त्यसले तिमीहरूलाई छुनेछैन ।’
यसप्रकार जंगबहादुरले अनेक अनुहारमा एक शताब्दी चानचुन ऐन–कानून भन्दा माथि रहेर देशको शासन चलाए ।
लच्छु हाँस्यो, ‘कसरी थाहा पाउनुभयो तपाईंले, जंगबहादुरले आफ्ना भाइहरूलाई एकान्तमा भनेको कुरा ? आफैंले सुनेजस्तो गरी भन्नुहुँदैछ त ?’
‘किनभने, म स्वयं जंगबहादुर हुँ ।’
बूढो गम्भीर थियो । तर लच्छुलाई लाग्यो, ऊ जिस्किंदैछ । उसले पनि जिस्केरै गम्भीरताको अभिनय गर्‍यो, ‘तपाईं मरेकै डेढ सय वर्ष हुन लाग्यो...’
‘म मरेर सिद्धिने प्रजाति होइन । त्यही भएर आज पनि मेरो श्राद्ध गर्दैछन् । पिण्ड खान आइरहन्छु । आएपछि एक दुई दिन यतै बसिन्छ । हाम्रो एक दिन तिमीहरूको एक महीना हो भन्ने त तिमीलाई थाहै होला ।’
लच्छुले पत्याउने कुरै थिएन । तर उसलाई बूढाको कुरा रमाइलो लागिरहेको थियो । बूढाले कुरा अगाडि बढायो, ‘राणा शासन सिद्धिएपछि छ दशक जति राजाको राज चल्यो । तर राजवंशमा मेरै रगत प्रवाहित भइरहेको थियो । त्यसैले राजाहरू मेरै भाका दोहोर्‍याइरहन्थे, ‘संविधान र कानून हामीले दिने हो, त्यसैले हामी तीभन्दा माथि छौं । हामीलाई तिनले छुँदैनन् । ऐन–कानून लाग्ने प्रजालाई मात्र हो, राजा र राजपरिवारलाई होइन ।’
‘अब त राजा पनि छैनन् । गणतन्त्र आएकै १५ वर्ष हुन लागिसक्यो,’ लच्छुले प्रश्न गर्‍यो, ‘अब कोही जंगबहादुर कसरी बन्न सक्छ ?’
‘पहिले एउटा राजा हुन्थे । तिनलाई लखेटेपछि थुप्रै राजा पैदा भएका छन्,’ बूढाले भन्यो : ती सबैको टाउकामा तिम्रा महाराज छन् । उनी भन्छन्, ‘म संविधान भन्दा माथि छु । कानून मैले दिने हो, त्यसैले म कानून भन्दा माथि छु । मलाई संविधान, कानून केहीले छुँदैन । कानून लाग्ने जनतालाई मात्र हो ।’
उनी बिहान उठ्नासाथ ऐना हेर्छन् । त्यसमा आफ्नो होइन, मेरो अनुहार देख्छन् र दंग पर्छन् । तर आफूलाई मभन्दा शक्तिशाली ठान्छन् । भन्छन्, ‘जंगबहादुर त श्री ३ मात्र थिए । उनीभन्दा माथि श्री ५ हुन्थे, जसलाई राजा भनिन्थ्यो । अहिले दुवै छैनन् । त्यसैले दुवै मै हुँ । श्री ३ पनि, श्री ५ पनि । दुवैलाई जोडेर म श्री ८ महाराज हुँ । संविधान र कानूनले मेरो इच्छा अनुसार सास फेर्छन् । मैले जे भन्छु, त्यही संविधान हो । त्यही कानून हो । त्यही ऐन हो । त्यही नियम हो ।’
तिम्रा महाराज मेरा नयाँ संस्करण हुन् । उहिले मेरो अनुहार राणा खलकमा मात्र देखिन्थ्यो, अहिले उनको अनुहार जोसुकैमा पनि देखिन्छ ।
लच्छुले बूढालाई उडाउने हिसाबले भन्यो, ‘खोइ, मैले त आजसम्म कसैमा महाराजको अनुहार देखेको छैन । तपाईंका कुरा कसरी पत्याऊँ ?’
‘तिम्रा आँखा आधा टालिएका छन् । पख है त, म तिनलाई पूरै खोलिदिन्छु । अनि छर्लंग देख्नेछौ छोटे महाराजहरूलाई ।’ बूढाले भन्यो र आफ्नो आँखाबाट साइँली औंलाले अलिकति गाजल निकालेर लच्छुका आँखामा लगाइदियो ।
साँच्चै चमत्कार भयो । टाउको घुमाएर पल्लो टेबुलतिर हेर्दा लच्छुलाई लाग्यो, महाराज चुरोट तान्दै चिया खाइरहेका छन् । पहिले त ऊ झस्क्यो, तर ध्यान दिएर नजर लगाउँदा थाहा पायो, त्यो त उसकै गाउँको गुण्डा रहेछ, जो ऊसँगै बस चढेर काठमाडौं आएको थियो । नजाने कतिलाई लुटेको, पिटेको थियो उसले, तर कहिल्यै कानूनको पन्जामा परेको थिएन ।
लच्छु पुलकित भएको देखेर बूढाले भन्यो, ‘ल हिंड अब, तमाशा हेर्न ।’
दुवै जना चियापसलबाट निस्के र यस्सो आमसभातिर दृष्टिपात गरे । लच्छुले देख्यो— मञ्चमा आसीन पाँचै जना परम–वरिष्ठ नेता, जो हरेक सभामा पानी पिई पिई महाराजलाई गाली गर्न नामूद थिए, भाइ–महाराज देखिन थालेका थिए । तिनको गर्जन आफ्नै कर्महरूबाट डराएर गरिएको आर्तनाद जस्तो सुनिन्थ्यो । कोही मारिएकाहरूले, कोही घाइतेहरूले, कोही होली वाइन पिलाउनेहरूले, कोही नोटका सुटकेसहरूले, कोही सुन तस्करहरूले लखेट्लान् भनेर डराए जस्तो ।
अर्को सडकमा २० जना जतिको जुलूस थियो, थरीथरीका प्लेकार्ड बोकेर महाराजविरुद्ध नारा लगाउँदै हिंडेको । उनीहरू आफूलाई आफैंले अगुवा घोषित गरिरहेका थिए, स्वतन्त्रता पक्षधर बताइरहेका थिए र आफ्नो समर्थन नगर्नेलाई प्रतिगामीको उपाधि वितरण गरिरहेका थिए । रमाइलो त के भने, तिनीहरूको मुहारमा पनि महाराज नै हाँसिरहेका थिए ।
बूढाले लच्छुलाई भन्यो, ‘यसरी सडक नापेर हुँदैन । अब विभिन्न कार्यालय र मन्त्रालयतिर लागौं ।’
उनीहरू जहाँ पुगे, महाराज त्यहीं उपस्थित थिए । लच्छुले देख्यो— शक्तिको आडमा कानून मिच्ने र आफूलाई कानून भन्दा माथि ठान्ने हरेक व्यक्तिमा उनै क्रियाशील रहेछन् । कहीं व्यापारीको भेषमा एक करोडको सामान दिएर २२ करोडको बिल बनाइरहेका थिए त कहीं २२ करोड कर तिर्नुपर्नेमा एक करोड तिरिरहेका थिए । कर्मचारीको भेषमा दुवैको काम फत्ते गराइदिने पनि उनै थिए । कहीं अर्बौंको ऋण नतिरेर बैंक डुबाइरहेका थिए त कहीं समयमा पुल नबनाएर लागत दोब्बर बनाइरहेका थिए । कतै सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराइरहेका थिए भने कतै राजनीतिक कार्यकर्ता बनेर बजेट पचाइरहेका थिए । भ्रष्टाचार गर्ने उनै थिए र भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिन पनि उनै सक्रिय थिए ।
मन्त्रालयमा मन्त्री र सांसदबीच सौहार्दपूर्ण संवाद चलिरहेको थियो । मन्त्री ‘यो त नियमले मिल्दैन यार’ भन्दैथियो । सांसद ‘नियमले मिल्ने भए तिमीकहाँ किन आउँथें ?’ भनेर पेल्दैथियो । सांसदले ‘एउटा हस्ताक्षर धस्काउँदा दुई करोड आउँछ, यस्तोमा पनि नियम खोज्ने ?’ भनेपछि मन्त्रीले ‘पैसा चाहिं सालीको खातामा हालिदेऊ नि’ भन्दै तत्काल सही गर्‍यो । सांसदले ‘यो हो नि मन्त्रीको पावर भनेको’ भनेर फुर्क्यायो भने मन्त्रीले ‘कानून नतोडेसम्म आफूसँग पावर भएको अनुभूति नै हुँदैन यार’ भनेर ङिच्च गर्‍यो । दुवैले अट्टहास गरे । दुवैको अनुहारमा महाराज झुल्किसकेका थिए ।
अन्त्यमा उनीहरू सरकारी अस्पताल छिरे । डाक्टरको कोठाबाहिर १२ जना बिरामी प्रतीक्षा गरिरहेका थिए । एउटाले गेटपालेलाई अलि पर लगेर के खासखुस गर्‍यो कुन्नि, उसले सात जनाको पालो मिचेर त्यसलाई भित्र छिराइदियो । अरू बिरामी गेटपालेलाई गाली गरिरहेका थिए, तर उसको अनुहार मलिन होइन, प्रफुल्लित थियो । लच्छु जिल्ल पर्‍यो, उसको काँधमाथि त महाराज पो मुस्कुराइरहेका रहेछन् । सोच्यो, ‘ऊ पनि आफ्नो ढोकाको महाराजै त हो नि !’
घाम अस्ताउन लागेको थियो । एउटा सेल्फी खिचिहाल्नुपर्‍यो भनेर लच्छुले बूढालाई आफ्नो पछाडि उभ्यायो र मोबाइल समातेर दाहिने हात अगाडि तन्कायो । बूढो मान्छे फ्रेममा परेन । मोबाइल दायाँ–बायाँ सार्दा पनि ऊ देखिएन । ‘नछेकिने गरी उभिनोस् न’ भन्दै लच्छु पछाडि फर्कंदा बूढो गायब भइसकेको थियो ।
प्रकाशित : फाल्गुन ८, २०७७ ०९:२१
मन्त्रीले शपथ लियो, ‘देशको हितमा काम गर्नेछु ।’ यन्त्रमा आवाज आइरहेको थियो, ‘माफिया र डनको हितमा काम गर्नेछु ।’
फाल्गुन १, २०७७ शरच्चन्द्र वस्ती
अमेरिकाबाट फर्कंदा देबुका खुट्टा भुइँमा थिएनन् । कारण थियो— काकाले दिएको कानेखुसी यन्त्र । झ्वाट्ट हेर्दा मोबाइलबाट गीत सुन्ने फुच्चे इयरफोनको एउटा डल्लो जस्तो लाग्ने त्यो यन्त्र अचम्मको थियो । चट्ट एउटा कानमा घुसारेपछि चमत्कार शुरू गरिहाल्थ्यो ।
कानेखुसी यन्त्रको विशेषता थियो— अर्काको मनको कुरा बताइदिनु । अर्थात्, कसैले मनमा एउटा कुरा राखेर मुखले अर्कै कुरा गरिरहेको छ भने यसले उसको मनको कुरा कानमा भनिदिन्थ्यो, त्यो पनि उसकै स्वरमा । मानौं, कसैले तपाईंसँग दश हजार रुपैयाँ सापटी माग्दैछ र विश्वास दिलाउन खोज्दैछ, ‘अर्को हप्ता फिर्ता गरिहाल्छु’ भनेर । तर उसको मनमा बेग्लै खिचडी पाक्तैछ । यस्तो वेला, तपाईंले कानमा यो यन्त्र लगाउनुभएको छ भने उसको बोली सुन्नुहुनेछ, ‘पैसा त हात परोस् न । फिर्ता त अर्को वर्षसम्ममा पाइस् भने पनि धन्य ठान्नू ।’
झूटो बोलेको पत्ता लगाउने उपकरण त पहिले पनि थियो, तर त्यसबाट मानिसको मनमा रहेको असली कुरा पत्ता लाग्दैनथ्यो । ठाउँको ठाउँ मनको कुरा बताइदिने यो नयाँ यन्त्र थियो । यसको आविष्कार त्यही कम्पनीले गरेको थियो, जसमा देबु अर्थात् देवराजका काका ‘वैज्ञानिक’ पदमा काम गर्थे । व्यापारिक उत्पादन शुरू भइसकेको थिएन । आन्तरिक प्रयोगका लागि सय थान नमूना मात्र तयार भएका थिए, जसमध्ये एउटा यन्त्र ‘दुरुपयोग नगर्ने’ शर्तमा काकाले उसलाई उपहार दिएका थिए ।
राजनीतिक समाचार र खोजमूलक रिपोर्टिङमा रुचि राख्ने जोशिलो पत्रकार थियो देबु । कानेखुसी यन्त्र आफ्ना लागि वरदान साबित हुने कुरामा उसलाई शंका थिएन । हवाईजहाज काठमाडौंमा अवतरण गर्दा ऊ सोच्तैथियो, ‘कुरा लुकाउने नेता र सूचना लुकाउने कर्मचारीले अब मलाई ढाँट्न सक्तैनन् ।’
पाँच वर्षअघि किनेको सेकेन्ड ह्यान्ड ल्यापटप बोकेर अमेरिका गएको देबुले नयाँ ल्यापटप किनेर ल्याएको थियो । विमानस्थलको कर्मचारीले उसको ब्याग खोल्न लगायो र भन्यो ‘दुइटा कम्प्युटर ल्याउन पाउनुहुन्न । एउटाको भन्सार लाग्छ ।’
उसको दाउ देबुबाट पाँच हजार रुपैयाँ उछिट्याउने थियो, जुन कुरा कानेखुसी यन्त्रले बताइसकेको थियो । उसलाई कुनामा लगेर देबुले भन्यो, ‘पाँच हजार त बढी भयो नि भाइ, दुई हजार लिनोस् न !’ आफ्नो मनमा रहेको कुरा उसको मुखबाट सुनेर कर्मचारी झस्कियो र केही नलिई छोडिदियो ।
भोलिपल्ट बिहान देबु तर्कारी किन्न निस्केको थियो । तर्कारी पसलमा उसकै टोलका दुई जना अधबैंसे भेट भए । नमस्कार गर्दै एउटाले सोध्यो, ‘सन्चै हुनुहुन्छ ?’ नमस्कार फर्काउँदै अर्काले जवाफ दियो, ‘सन्चै छु ।’
सामान्य शिष्टाचार थियो त्यो । तर कानमा यन्त्र लगाएको देबु उनीहरूको मनको कुरा सुनेर तर्स्यो । पहिलोले भनेको थियो, ‘एकाबिहानै यो अलच्छिनाको मुख देख्नुपर्‍यो । पूरै दिन खराब हुनेभयो ।’ दोस्रो भन्दैथियो, ‘म सन्चो हूँ कि नहूँ, तँ गँजडीलाई के मतलब ?’ सधैं एकअर्कालाई मुस्कुराएर अभिवादन गर्ने तिनीहरूको मनमा एकअर्काप्रति यस्तो घृणा भरिएको होला भन्ने देबुले सपनामा पनि सोचेको थिएन ।
त्यही बिहान श्रीमतीले ‘घरखर्च सकियो’ भनेर ग्याँस किन्न पैसा माग्दा देबुको दिमाग पूरै रन्थनियो । किनभने, कानेखुसी यन्त्रबाट उनको आवाज आइरहेको थियो, ‘पाँच हजार रुपैयाँ लुकाएर राखेकी छु ।’ उसले श्रीमतीलाई नराम्ररी गाली गर्‍यो । उनले त्यो रकम केटाकेटीको स्कूल फी तिर्न जोगाएर राखेको बताएपछि पछुताउँदै माफी माग्यो, तर मन भारी भइरह्यो ।
खाना खाएर अफिस जान बस चढेको देबु त्यही रनाहामा टोलाइरहेको थियो । पछाडिको सीटमा स्कूल ड्रेस लगाएका एक जोडी टाउको जोडेर चूपचाप बसेका थिए । अचानक केटीले भनी, ‘म तिमी विना बाँच्न सक्तिनँ ।’ कानेखुसी यन्त्रमा उसको आवाज सुनियो, ‘मलाई आजै नयाँ बूट किनिदेऊ । नत्र तिमीलाई ब्रेकअप दिन्छु । अर्को ब्वाइफ्रेन्डले हत्ते गरिराख्या छ ।’
देबुको दिमाग रन्कियो । उसले पछाडि फर्केर केटालाई भन्यो, ‘यस्ती केटीको पछि नलाग भाइ, तिमी बर्बाद हुन्छौ ।’ केटी राता आँखाले उसलाई हेर्दै केटासँग लपक्क टाँसिई । केटाले ‘के भनिस् अरे ?’ भनेर देबुलाई एक मुक्का दियो । ‘नचाहिने कुरा गरेको’ भन्दै यात्रुहरू उसलाई गाली गर्न थाले । ऊ केही नबोली बसबाट ओर्लियो र पैदलै सडक नाप्न थाल्यो ।
बाटोमा वडा अध्यक्षसँग जम्काभेट भयो । ‘के छ नेताजी, हालखबर ?’ भनेर सोध्दा ङिच्च गर्दै उसले भन्यो, ‘रातदिन तपाईंहरूकै सेवामा लागेको छु । न खाने फुर्सद छ, न सुत्ने ।’ त्यही वेला कानमा उसको बोली सुनियो, ‘यो वर्षको बजेट कागजपत्र मिलाएर सिध्याइहालें । विकास–सिकास अब अर्को वर्ष !’
देबुले झन्डै उसलाई कुटेको । बडो मुश्किलले मन थाम्यो र अघि बढ्यो । उसलाई लाग्यो, समाजमा अरूको सत्य जानेर दुःख मात्र पाइने रहेछ । जो पनि फटाहा जस्तो लाग्ने र रीस उठ्ने । सत्य त पत्रकारितामा मात्र काम लाग्छ क्यार !
अफिस पुग्दा सम्पादकले भने, ‘मल काण्डको समाचार पहिले पनि तिमीले नै लेखेको हो । अब एक हप्ता समय लिएर त्यसैबारे घच्चीको खोज–रिपोर्टिङ तयार पार ।’
ऊ आँखा चिम्लेर काममा भिड्यो । यसपालि उसलाई धेरै सजिलो भयो । सम्बन्धित हाकिमकहाँ पुग्दा उसले पहिलेझैं ‘यसमा कुनै भ्रष्टाचार भएको छैन’ भनेर अनेक बिंगा लगाउँदै गयो । तर, त्यही वेला कानेखुसी यन्त्रमा उसको स्वर सुनिदैथियो, ‘फलानो दिन फलानोबाट यति पैसा लिएँ । त्यसबाट फलानो फलानोलाई यति पैसा बुझाएँ । मैले मात्र खाएको हो र ?’
सारा तथ्य समावेश गरेर उसले तीन दिनभित्रै सम्पादकलाई रिपोर्ट बुझायो । उनले भने, ‘स्टोरी त आयो, मलाई पनि कुरो यही हो जस्तो लाग्छ, तर प्रमाण खोइ ? न कुनै कागजात छ, न कसैले साबिती बयान नै दिएको छ । विना प्रमाण कसरी छाप्ने ?’
देबु मौन थियो । यन्त्रको गोपनीयता खोल्न उसलाई अनुमति थिएन । खोले पनि त्यसलाई कसैले प्रमाण मान्ने थिएन ।
अर्को दिन नवनियुक्त मन्त्रीको शपथग्रहण थियो । उसले शपथ लियो, ‘देश र जनताको हितका लागि इमान्दारीसाथ काम गर्नेछु । राष्ट्रको प्रगति नै मेरो लक्ष्य हुनेछ ।’ त्यही वेला यन्त्र मार्फत देबुका कानमा मन्त्रीको आवाज घन्कियो । ऊ भनिरहेको थियो, ‘तस्कर, माफिया र डनको हितका लागि नियमकानून मिचेर काम गर्नेछु । जसरी हुन्छ, पैसा कमाउनु नै मेरो लक्ष्य हुनेछ ।’
शपथग्रहण पश्चात् उसलाई बधाई दिंदै एउटा सांसदले भन्यो, ‘सफलताका लागि हार्दिक शुभकामना, मित्र !’ देबुका कानमा उसको आवाज आयो, ‘मलाई छिर्के हानेर मन्त्री भएको छस् । हेरिराख् न, छ महीनाभित्र तँलाई भ्रष्टाचारमा फसाउन सकिनँ भने म एउटा बाबुको छोरो होइन ।’ त्यस दिन देबुले समाचार लेखेन ।
तीन दिन पछि उसलाई दुई बडे नेताजीहरूको अन्तर्वार्ता लिन खटाइयो । एउटाका विरुद्ध अर्काले अदालतमा मुद्दा हालेका थिए । कसले जित्ने हो र कसले हार्ने हो, टुंगो थिएन । दुवै जना सडकबाट अदालतलाई धम्क्याइरहेका थिए । देबुले पालैपालो दुवैसँग कुरा गर्‍यो । दुवैले सल्लाह मिलाएर बोलेझैं एकैनासको जवाफ दिए, ‘सम्मानित अदालतमाथि मेरो अगाध आस्था छ । मलाई विश्वास छ, अदालतले अवश्य न्याय गर्नेछ ।’
कानेखुसी यन्त्र भने उनीहरूको मनको कुरा तिनकै आवाजमा सुनाइरहेको थियो, ‘अदालतले मेरै पक्षमा निर्णय गर्नुपर्छ । न्याय भनेकै त्यही हो । नत्र न्यायाधीश र अदालत दुवैको खैरियत छैन । मेरो सामु तिनको के हैसियत छ ?’
देबुले त्यसैको आधारमा अन्तर्वार्ता तयार गर्‍यो । तर सम्पादकलाई पत्यार लागेन । उनले दुवै बडे नेताजीलाई फोन गरे । दुवैको भनाइ एउटै थियो, ‘मैले त्यसो भनेकै छैन । भनेको भए रेकर्ड बजाएर सुनाऊ ।’
कानेखुसी यन्त्रको आवाज रेकर्ड हुन सक्तैनथ्यो । अन्तर्वार्ता छापिएन । देबु चुम्रुक्क पर्‍यो ।
सत्य पत्ता लगाउने अचूक उपकरण देबुका हातमा थियो । सत्य उसका सामु छर्लंग हुन्थ्यो । तर त्यसको प्रमाण ऊ जुटाउन सक्तैनथ्यो । बडो दुःख गरेर प्रमाण नजीक पुग्न लाग्दा ती अदृश्य भइसकेका हुन्थे । फलतः उसले लेखेका समाचार अखबारमा आउन छाडे । उसका रिपोर्ट चित्तबुझ्दा हुन्थे, तर छापिंदैनथे । ऊ आफैंदेखि निराश देखिन थाल्यो ।
एक दिन कानेखुसी यन्त्र हरायो । फुच्चे इयरफोनको एउटा डल्लो जत्रो त्यो जिनिस जति खोज्दा पनि भेटिएन । हप्ता दिन जति त देबु त्यसको शोकमा टोलाएरै बस्यो । त्यसपछि बिस्तारै काम गर्न थाल्यो । पहिले झैं उसका समाचार फटाफट छापिन थाले । प्रमाण जुटाउनु भन्दा दाबी, अनुमान र सम्भावनाको खेल पस्कनु सजिलो रहेछ भन्ने उसले राम्ररी बुझिसकेको थियो । ऊ भन्न थालेको थियो, ‘सत्य फेला पार्न जति सजिलो छ, प्रमाणित गर्न उति नै गाह्रो ।’
त्यत्रो उत्साहका साथ अमेरिकादेखि ल्याएको कानेखुसी यन्त्रबाट देबुलाई कुनै फाइदा भएन— न व्यक्तिगत जीवनमा, न त पेशागत जीवनमै । उसले कहिल्यै थाहा पनि पाएन, उसको बिजोक देखेर उसकै श्रीमतीले त्यो ठाँडो वाग्मतीमा बगाइदिएकी थिइन् । यन्त्र भए पो थाहा पाउनु !
प्रकाशित : फाल्गुन १, २०७७ १०:०७